दाङको पश्चिम क्षेत्रमा केसी कि गिरी ?
दाङ, कात्तिक २९ । दाङका तीन वटा क्षेत्रमध्ये ३ नम्बरमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिपक गिरीले बाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव हिराचन्द्र केसीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको क्षेत्रका रुपमा रहेको यसक्षेत्रमा गिरीले प्रतिष्ठाको रुपमा लिएका छन् भने केसीले पहिलो पटक जनताका बीचमा परीक्षा दिने दिँदैछन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिपक गिरीले तेस्रो पटक प्रतिष्पर्धा गरीरहेका छन् । यसअघि गिरीले २०६४ मा नेकपा माओवादीकी नेतृ सुष्मा शर्मासंग पराजित भएका थिए । त्यसैगरी २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका युवा नेता उत्तरकुमार वलीलाई हराउँदै विजयी भएका थिए ।
गिरीले १५ हजार बढी ल्याएर विजयी भएका थिए भने वलीले १० हजार बढी ल्याएर पराजय ब्यहोरेका थिए । अहिले वलीले प्रदेशसभाका लागि उमेदवार बनेका छन् । वलीसंग अहिले २०७० सालमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेललाई हराएका काँग्रेसका बुद्धिराम भण्डारीसंग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् ।
२०७० सालमा सभासद् भएपछि गिरी सिचाई मन्त्री भएका थिए । क्षेत्र नम्बर ३ मा बबई, शान्तिनगर, दंगीशरण गाउँपालिका र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १६, १७, १८ र १९ बाहेक सबै वडाहरु समेटिएका छन् । यसक्षेत्रमा एक लाख १८ हजार नौँ सय ८७ मतदाता रहेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनावमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण र बबई गाउँपालिकामा नेकपा एमाले विजयी भएको छ भने शान्तिनगर गाउँपालिमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको थियो । यही मतले पनि गिरीको चुनावी यात्रा कठिन देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लैले नेपाली काँग्रेसलाई हम्मेहम्मे बनाएको थियो भने अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको मत पनि थपिएपछि साझा उमेदवार केसीको यात्रालाई सहज बनाएको छ ।
स्थानीय तहको मतलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले ४० हजार नौँ सय २१ मत ल्याएका थिए भने नेपाली काँग्रेस एक्लैले २६ हजार आठ सय ४६ मत ल्याएको पाइएको छ । काँग्रेस र बाम गठबन्धनबीचको मतान्तर १४ हजार ७५ देखिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा क्षेत्र नम्बर ३ का मतदाताले कसलाई रोज्छन् भन्ने विषयले चिया पसलदेखि चोकचोकमा चर्चा पाएको छ । स्थानीय तहको मतलाई बाम गठबन्धनले सुरक्षित राख्न सक्यो भने सहज जित देखिन्छ भने नेपाली काँग्रेसभित्र स्थानीय तहको समयमा देखिएको मतभेद अन्त्य भएमा केही मत बढाउन सक्ने देखिन्छ । तर, पनि गिरी केसीले मत माग्दै गाउँघरमा पुगेका छन् । गिरीले जित्ने की केसीले जित्ने यसको छिनोफानो यसक्षेत्रका मतदाताले मंसिर २१ गते गर्ने छन् ।
दूधमा बेसार हालेर पिउँदा यस्तो फाइदा
दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिने बेसार एउटा उत्कृष्ट प्राकृतिक औषधि हो । यसले शरीरका बिभिन्न रोगहरु निको पार्न सघाउ पुर्याउँछ । साथै रोगसँग लड्ने क्षमता समेत राख्छ ।
यसरी डुबेकाे थियाे अमिताभकाे ९ सेकेन्डमा ६ सय ४० करोड !
एजेन्सी । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनलाई एक झट्का लागेको छ । बिग बीलाई करोडौको घाटा लागेको छ ।
काठमाडौं । बलिउडमा त्यस्ता कयौं कलाकार छन् । जो भारतीय नभएपनि स्टार बनेर चिनिन सफल छन् ।
बागलुङ । बुटवलबाट बुर्तिबाङ आउँदै गरेको लु१ ख ७४३९ नम्बरको रात्रि बस आज बिहान दुर्घटना हुँदा तमानखोला गाउँपालिका–३ की ८४ वर्षीया कुमारी बुढाको मृत्यु भएको छ ।